ओल्गा रोमे परेरा। जब हामीहरू भगवानहरू थिए लेखकका साथ अन्तर्वार्ता वर्तमान साहित्य
फोटोग्राफी। ओल्गा रोमेको सौजन्य।
ओल्गा रोमे परेरा, लुगो मा जन्म, एक लेखक हो ऐतिहासिक उपन्यास र जस्तै शीर्षक प्रकाशित गरेको छ सिनेटका बच्चाहरू, पहिलो नागरिक पेरिक गर्दछ y चेस खेलाडी। उनको नवीनतम उपन्यास हो जब हामी देवताहरू थियौं। मलाई यो दिनुहोस् साक्षात्कार म तपाइँको समय र दया को लागि धेरै धेरै धन्यवाद।
ओल्गा रोमे परेरासँग अन्तर्वार्ता
ओल्गा रोमा प्यारी: अस्सी दिनमा दुनिया भरिजुल्स भेर्न द्वारा। यो सचित्र Bruuera को संग्रह को एक हिस्सा थियो। पात्रहरू गीतमा कोरिएका थिए र पृष्ठहरूमा बायाँपट्टि टेक्स्ट थियो र दाँयामा हास्य थियो।
मैले लेखेको पहिलो कथाaछोटो कथा, यो भनिन्थ्यो दस प्रतिशत र यो एक मानिसको बारेमा हो जसले आफ्नो प्राण शैतानलाई बेच्यो, जसले उसलाई आफूले चाहेको सबै चीज पायो, जहिले पनि लाभको एक प्रतिशत लिने। मलाई लाग्छ मैले यो हराएको छु, यो लायक थिएन।
ORP: चितुवा लाम्पेडुसाको। यो उच्च साहित्यको साथ मेरो पहिलो सम्पर्क थियो। जे होस् जब म यो पढ्ने गर्छु म १ fifteen वर्षको थिएँ, म अझै पल्प, केही प्रतीकात्मक वाक्यांश र पात्रहरू सम्झन्छु। म फेरि पढ्न चाहन्न, म सिसिलीमा गए पनि। यो यस तरिकाले उत्तम छ, तपाईंले जादूलाई तोड्नु पर्दैन।
ORP: हिस्पानिक्स खुशीसाथ फेरि पढ्थे वर्गास लोलो, उनामुनो, माइकल डेलीब्स र जुआन मार्स। अमेरिकीहरुलाई स्कट फिटजेराल्ड, पॉल कस्तूरी y जैक लन्डन। टमासलाई जर्मन मानिस र हर्मन हेस्स। इटालियनहरूलाई इटालो क्याल्विन र फ्रान्सेली गर्न प्रोस्ट, फ्लाबर्ट पहिले नै amélie नथोम्ब, जे होस् मलाई लाग्छ यो बेल्जियमको रूपमा गनिन्छ तर फ्रेन्चमा लेख्दछ।
ऐतिहासिकमा: लियोन आर्सेनल, लुइस भिल्लान y Emilio lara.
जे होस् यदि मैले मरुभूमि टापुमा किताब लिनु परेमा, उत्तम सधैं नै हुन्छ इतिहास de हेरोडोटस.
गणना बेलिसारियस रोबर्टबाट लास.
कुनै हैन, म लेख्छु en cualquier lugar जहाँ म मेरो ल्यापटप राख्न सक्छु।
म आफैंमा प्रेषण झोला पछि
AL: हामी तपाईंको उपन्यासमा के पाउँछौं जब हामी देवताहरू थियौं?
ओआरपी: उपन्यास को साथ सुरु हुन्छ को मृत्यु बेबिलोनमा अलेक्ज्याण्डर महान, उसको सामान्य टोलेमीले लाश चोरेर लान्छ र यसलाई मिश्रमा गाड्दछ। त्यहाँ एउटा चकाचिपूर्ण संसार तपाईंको पर्खाइमा छ, हेलेनिस्टिक संसार र नील देशको पुरानो संस्कृति बीचको संस्कृति संघर्ष जुन हजारौं बर्षदेखि अपरिवर्तित छ।
उपन्यास हो सेट दुई समानान्तर संसारमा: बेबिलोन र इजिप्ट। बेबिलोनमा अलेक्ज्याण्डरको साम्राज्य भंग भयो र इजिप्टमा नयाँ टोलेमी गभर्नरको आशा छ।
En बेबिलोनिया पात्रहरूको दरबारमा बस्छन् नबूकदनेसर वा त्यो मा डारो, नौकरशाहहरू बीच, अलेक्ज्याण्डरका विधवाहरूको हारम, नपुंसक र षडयन्त्रहरू। खुल्ला मिश्र पाठक मा मा dve हुनेछ Tebas कर्नाकको मन्दिरमा, शहर मेम्फिस र को निर्माण मा सहयोग गर्दछ अलेक्जान्ड्रिया.
नील देशमा, नायकहरू हुन् पुजारीहरू जो कर्णकमा बस्छन् र आत्मिक भवन छ जुन म्यासेडोनियालीहरूले पाउँदैनन्। संसार म्यासेडोनियन ऊ योद्धा हो, महत्वाकांक्षी र प्रभुत्वमा छ अलेक्ज्याण्डरका पूर्व सेनापतिहरू.
र कथानक मा intertwining को एक रंगीन प्रशंसक देखिन्छ महिलाहरु: थाई, टोलेमीको हेटाइरा, आर्टकामा, आफ्नो फारसी पत्नी, रोक्साना, अलेक्ज्याण्डरको विधवा, Eurydice, टोलेमीको राजनीतिक पत्नी र मर्टल, म्यासेडोनियन मालकिन।
दुबै फ्रेमहरूबेबिलोन र मिश्री, कन्भर्ज गर्नुहोस् जब जनरल टोलेमी नील देश आइपुग्छ। यो त हो कि म्यासिडोनियालीले इजिप्टको संस्कृति र रीतिथितिहरूसँग सम्बन्धित र अनुकूल हुन सिक्नुपर्‍यो।
ORP: म छु धेरै आर्कटिक, म दुई रिडि club क्लब र एक कलाको हो, म आफैंलाई मेरो सहकर्मीहरूको प्रस्तावबाट सल्लाह दिन दिन्छु। मलाई लाग्छ यो यस तरीकाले राम्रो छ, यस तरीकाले मैले पुस्तकहरू पढें जुन मैले पुस्तक पसलमा कहिल्यै छनौट नगर्ने थिएँ। यो एक शानदार अनुभव हो, म सबैलाई सिफारिस गर्दछु।
ओआरपी: म पढ्दै छु भोलि स्वतन्त्रता डोमिनिक ल्यापिएर र ल्यारी कोलिन्स द्वारा। अब म एक वास्तविक चरित्रको बारेमा लेख्छु: रोमन सम्राटको छोरी। म यो को हो भनेर बताउन मन पराउँदिन।
यो पुस्तकहरू र घट्ने पाठकहरूको बजारमा बाढिएको छ। एक विरोधाभास हुन्छ: पाठक अब एक लेखक हुन चाहान्छन्, धेरैले विश्वास गर्छन् कि तिनीहरू सुधार गर्न सक्छन् वा कम्तिमा। तपाइँको मनपर्ने लेखकहरू मिलाउनुहोस्। लेखकहरूको उदय परिणाम ल्याउँछ कि सम्पादकीयहरू तिनीहरू हेर्छन् पाण्डुलिपिहरूको बाढीले। र, अर्को तर्फ, इन्टरनेट लेखकहरु को पूरा भैरहेको छ पहुँच गर्नेहरु को लागी डेस्कटप प्रकाशन.
प्रकाशकहरूले विकृत सर्पिलमा प्रवेश गरेका छन्: प्रत्येक महिना तिनीहरू समाचार जारी गर्छन्, हजारौं पुस्तकहरूको साथ पुस्तक पसलहरू अभिभूत गर्नुहोस् जुन केहिमा सेल्फमा एक महिना भन्दा बढि हुँदैन। को पुस्तकपत्रहरू तिनीहरू अब किताब सिफारिस गर्न सक्दैनन् किनकि यस्तो गति मा पढ्न असमर्थ। तिनीहरूको समीक्षा, ब्लगहरू, आलोचकहरू र उनीहरूको सहज ज्ञानहरू विश्वास गर्नुपर्दछ।
पहिलो लाइनरमा ठाउँ ओगट्न संघर्ष असमान छ, साना प्रकाशकहरूले यति धेरै समाचारहरू लिन सक्दैनन् र तिनीहरूलाई दोस्रो प row्क्तिमा राखिन्छन्। किताब पसल विन्डोजमा घुमाउँदछ किताब पसलहरू जस्तै कपडाहरू जस्तै फेसन स्टोरको पसल विन्डोमा, यदि तपाईं दुई महिना पछि फिर्ता जानुभएको त्यो पुस्तक खोज्नको लागि, सम्भावनाहरू यो त्यहाँ हुनेछैन।
यस्तो दृश्यको साथ, लेखकहरू हामी हुन निन्दा छ टुक्रिएको खेलौना यस उद्योगको, सब भन्दा कमजोर अंश: तपाईले लेख्नुपर्दछ र लेख्नुपर्दछ, सँधै समाचारको लाइनमा हुनुपर्दछ, र त्यसपछि तपाईं नेटवर्कमा हुनुपर्दछ। त्यहाँ मुखको कुनै शब्द छैन, केवल सामाजिक नेटवर्कहरू। पागल दृश्यता छ वा मर्न।
ORP: I म सँधै संकटमा बाँचिरहेछु। म प्रकाशन संसारमा सामेल भएँ जब बिक्री घट्यो, डिजिटलीकरण गरिएको सबै पाइरेटेड थियो र पाठकहरू प्लेटफर्ममा श्रृंखला हेर्न गए। मैले नब्बेको दशकको छुट्टीहरू बिताएको छैन, न त महान संस्करणहरू नै, न त मैले आफ्ना उपन्यासहरू प्रस्तुत गर्ने प्रकाशकहरूको रंगीन दायरा देखेको छु।
सामान्य जस्तो म शार्कहरु बीच तैरिएको छुम पुरानो होईन र साना उपलब्धिहरु मेरो लागि जीत हो। तिनीहरू फुटबल मा भन्छन्: खेल द्वारा खेल। म ठान्छु कि मँ अझै पढाईको चरणमा छु, म विचारहरुबाट फुत्किएन र यो लेख्न मलाई रमाइलो लाग्यो.
हामीले पाठकहरूलाई भाग्नको लागि केहि गलत गरेका छौं। तपाईं पचास वर्ष पहिले जस्तो लेख्न सक्नुहुन्न, वा जस्तो पनि दस बर्ष पहिले। एक पाठक यदि ऊ अल्छी हुन्छ भने पेजको पछाडि जानु हुँदैन। उपन्यासहरू पहिले नै मोबाइल फोन, टिभी र कम्प्युटरको बिरूद्ध सुरू गर्नुपर्दछ, पाठकहरू कुनै पनि कुराबाट विचलित हुन्छन्, हामी तितरबितर छौं। मलाई लाग्छ प्रकाशकहरूले केही दोष लिनु पर्छ। शायद पाठक अझै छ, तर उसलाई आफूले चाहेको कुरा प्रदान गरिएको छैन।
सांस्कृतिक संसार टेडपोलहरूले भरिएको संकुचन पोखरी हो, तिनीहरू एक अर्कालाई खाने गर्दछन्, त्यहाँ ठाउँ छैन। अन्तमा अपरिहार्य हुनेछ: पढ्ने यो एक हुनेछ अल्पसंख्यकहरूको गढ, कमिकहरूले अधिक र अधिक महत्त्व लिनेछ, पुस्तकहरू पातलो हुनेछन्, लेखकहरू अधिक मध्यकालीन र साना संस्करणहरू।
सकारात्मक: त्यहाँ अझै सबै स्वादहरू, इमानदार आलोचकहरू, र साहसी प्रकाशकहरूको लागि पुस्तकहरू छन्।
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » साहित्य » साक्षात्कार » ओल्गा रोमे परेरा। जब Were Gods को लेखकसँग अन्तर्वार्ता